MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardNight Safety Data Packs service guide book mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Night Safety Data Packages
Night Safety Data Packages ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ ရနိုင်ပါသလဲ။
Night Safety Data Packs ဆိုသည်မှာ ည ၁၁နာရီ မှ မနက် ၇နာရီအတွင်း အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများအတွက် ဒေတာ အသုံးပြုနိုင်သော Package များဖြစ်ပါတယ်။
Night Safety Data Package များကို အောက်ပါအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၁၉၉ကျပ် USSD 180 MB ပုံမှန်အမြန်နှုန်း ၁ရက် *233*1#
၄၉၉ကျပ် 466 MB ၃ရက် *233*2#
၇၉၉ကျပ် 746 MB ၇ရက် *233*3#
၁၉၉ကျပ် 180 MB Max1.5Mbps ၁ရက် *233*4#
၄၉၉ကျပ် 466 MB ၃ရက် *233*5#
၇၉၉ကျပ် 746 MB ၇ရက် *233*6#
၁၉၉ကျပ် MPT4U 184 MB ပုံမှန်အမြန်နှုန်း ၁ရက် None
၄၉၉ကျပ် 475 MB ၃ရက်
၇၉၉ကျပ် 760 MB ၇ရက်
၁၉၉ကျပ် 184 MB Max 1.5Mbps ၁ရက်
ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကားအစီအစဉ်ရယူထားသော Prepaid/Postpaid GSM /WCDMA အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး Night Safety Data Pack ၏ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
အကြိမ်အရေအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Package အသုံးပြုနိုင်သည့် ကာလအတွင်းဝယ်ယူပါက ဒေတာပမာဏမှာ ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင် ပြီး Package သက်တမ်းကို လည်း ပိုရှည်ကြာသော သက်တမ်းနှင့် အသုံးပြုနိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Package ၏ သက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူထားသော Package များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ၁ရက်၊ ၃ရက်၊ ၇ရက် စသည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ လက်ကျန်ဒေတာများကို သယ်ဆောင်အသုံးပြုမှု မရရှိနိုင်ပါ။
*106*2# (သို့) *777# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး တခြားသူများသို့
အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပြီး အသုံးပြုနိုင်သော Night Safety Data Pack ဝယ်ယူထားပြီး သုံးစွဲနိုင်သော ဒေတာပမာဏနှင့် သက်တမ်းကျန်ရှိနေချိန်မှာ အင်တာနက်မြန်နှုန်းကို ထိန်းညှိပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော Night Safety Data Pack ကို ထပ်မံဝယ်ယူပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ။
နောက်ဆုံး ဝယ်ယူထားသော Package ၏မြန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အင်တာနက် မြန်နှုန်းကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Package တစ်ခု ဝယ်ယူသုံးစွဲထားပြီး သက်တမ်းကာလ နှင့် ဒေတာပမာဏ မကုန်ခင် နောက်ထပ် သက်တမ်းနှင့် ဒေတာပမာဏ မတူညီသည့် Package များ ထပ်မံဝယ်ယူပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာပါလဲ။
လက်ကျန် ဒေတာပမာဏသည် ထပ်မံဝယ်ယူလိုက်သော ဒေတာပမာဏနှင့် ပေါင်းစည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း ပိုရှည်ကြာသော Package ၏ သက်တမ်းအတိုင်းသုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံး ဝယ်ယူထားသော Package ၏မြန်နှုန်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အင်တာနက် မြန်နှုန်းကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Night Safety Data Pack ရဲ့ သက်တမ်းလည်ပတ်ပုံက ဘယ်လိုမျိုးရှိပါသလဲ။
Night Safety Data Pack သည် ၂၄နာရီသက်တမ်းဖြင့် အခြေခံ၍ လည်ပတ်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ ?
၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ။